Vaovao 6 Septambra 2020 – FPMA Toulouse
Vaovao 6 Septambra 2020
1-« Misaora amin’ny zavatra rehetra ; fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy ho anareo » 1 Tes 5 :18
Fianakaviana iray manolotra raki-pisaorana 100€ ka 50€ ho an’ny Fiangonana ary 50€ ho an’ny Mpitandrina.
2-Salamo 9: 1-2 « Hidera an’i Jehovah @ foko rehetra aho; Hanambara ny fahagaganao rehetra aho. Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo indrindra ô »
Raki-pisaorana (80€) avy @ olona tsy mitonona anarana atolotra ho amin’ny asan’ny fiangonana.
3– » Rendez grâces en toutes choses car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ «
1 thessaloniciens 5, 18
Raki- pisaorana 100 €s avy amin’ny Fianakaviana tsy nitonona anarana ka 50 € ho an’ny Fiangonana 50 € ho an’ny Mpitandrina. Mangataka hira Fanampiny 28 » Efa voadinikao »
4- Raki-pisaorana 200 € ka 100 € ho an’ny Mpitandrina ary 100 € ho an’ny Fiangonana
Mangataka ny hira 617 « Aza manadino ahy ry Mpihaino vavaka»
Ny famangiana ny fianakaviana Rija sy Seheno ANDRIAMOLALISOA izay namoy ny reniny dia ho tanterahina amin’ny Alahady 13 Septambra ho avy izao.
Ny fidiran’ny Sekolin’ny Tenin’Andriamanitra dia atao ny Alahady 13 Septambra hoavy izao, ka toy izao ny fandaminana :
– Ny fampianarana ny dingana D1 sy D2 dia atao mifanatrika ao amin’ny Vieux Temple, manomboka amin’ny 9 ora sy fahefany ka hatramin’ny 10 ora maraina.
Tsy maintsy misoratra anarana ireo ankizy ho avy satria voafetra ny toerana, amin’ny adiresy mail : stafpmatoulouse@gmail.com : io mailaka io dia asiana anaran’ny ankizy sy ny dingana misy azy – ary numéro téléphone-ny ray amandreny
– Ny dingana D3 koa dia atao mifanatrika fa mifandimby amin’ny D1 – D2 ; Rehefa tsy mifanatrika dia atao visio-conférence
– Ny fampianarana ny dingana D4 ka hatramin’ny D8 dia atao amin’ny alalan’ny visio conférence amin’ny 9 ora ka hatramin’ny 10 ora latsaka fahefany ary ny mpampianatra no mandefa ny rohy amin’ny ray amandreny
– Ny fampianarana ny D9 ihany koa dia mifanatrika fa ny toerana dia voafetra, koa hisy ny rohy ahafahana manaraka ny fampianarana.
Mba hahamora ny fidirana, dia ny dingana teo aloha ihany no misy ny ankizy fa mila manao inscription toy ny teo aloha amin’ity adresse ity : stafpmatoulouse@gmail.com.; avy eo alefa ny mpampianatra ny fiovana dingana raha misy.
Marihina fa ny ora dia naroso ho an’ny fampianarana visio conférence, hafahan’ireo izay hanatrika ny fotoam-pivavahana ho tonga ara-potoana.
Fanamarihana : ireo izay hanatrika ny fanompoam-pivavahana dia tsy maintsy misoratra anarana amin’ny rohy alefan’ny diakon’ny Vala toy ny mahazatra.
Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala miantso ireo mpampianatra STA.
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny famindrampony dia fifaliana ho an’ny Sampana Fifohazana ny manasa ny Fiangonana hiara – mankalaza aminy ny Isantaonany izay ho tanterahina ny Asabotsy 12 sy ny Alahady 13 Septambra ho avy izao.
Toy izao ny fandaharam-potoana amin’ izany
Ny Asabotsy 12 /09/20 amin’ny 3 ora ka hatramin’ny 4 ora sasany tolakandro dia misy fampianarana ataon ‘i Pasteur Elysée Andriamiandra ao Vieux Temple izay misokatra ho an’ny Fiangonana manontolo. Izany dia miompana amin’ny lohahevitra hoe : « Kristiana miorina tsara amin’ny finoana sy vavolombelona mahatoky hatramin’ny fahafatesana » 1Petera 5 : 8-9a, Apok 2 : 10b.
Ny Alahady 13 Septambra dia fotoam-pivavahana tarihin’ ny Sampana Fifohazana ao Vieux Temple amin’ny 10 ora sy sasany.
Manentana antsika rehetra mba hanatrika izany fotoana izany. Manentana antsika tsirairay hisoratra anarana mialoha araky ny fandaminana apetraky ny diakona
Manonona ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika rehetra
Ny Biraon’ny SAFIF
RAKITRA sy ADIDY
Ho fanohanana ny asam-piangonana izay tsy maintsy hatao dia amporisihina hatrany isika mba handrotsaka ny Rakitra sy ny Adidy izay tafiditra ao amin’ny fanajàna ny Andron’ny Tompo dia ny Alahady izany na afaka na tsy afaka manatrika mivantana ny fanompoam-pivavahana aza isika. Ny Andron’ny Tompo dia mitoetra ho andron’ny Tompo, ary ny fanajantsika izany sy ny adidintsika amin’ny Tompo sy ny Fiangonana dia tsy miato noho ny asan’ny Teniny amintsika.
Ampahatsiahivina ary fa ny fomba 3 hahafahantsika manao izany dia ny virement, ny chèque ary ny carte bancaire amin’ny alalan’ny lien HelloAsso. Jereo « rubrique Vondronasa Vola sy fananana ». Fa, afaka manao izany koa isika ao aorian’ny fanompoam-pivavahana ao anaty harona eo am-piravàna. Iangaviana fotsiny isika mba hanoratra ny anton’ireo fandraisana anjara na ho rakitra, na adidy na raki-pisaorana
Maneho ny fisaorana feno antsika hatrany izay efa namaly ny antso ary manentana ny fiangonana manontolo mbola hanohy izany.
Araka ny fivoriamben’ny mpandray tamin’ny volana Martsa 2019 dia mampandre antsika fa mitohy ny tetikasa @ firosoana fananana trano fiangonana.
Hisy vaomiera manokana hatsangana handinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonombola tiantsika hatao ho fanohanana izany asa izany dia alefa ao amin’ny sous compte « Trano fiangonana » koa asio « libellé Trano_ anarana » ny fandoavam-bola hatao. Ny numéro IBAN sous-compte FPMA Toulouse dia azontsika hanontaniana ny mpitam-bola ary halefa mailaka amintsika koa. Mitentina 6035 euros ny vola voaangona hatramin’izao.
Voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany.